Asthenia चिकित्सा मा सबै भन्दा साधारण समस्या को एक मानिन्छ आज छ। एक विकार यस्तो कुनै एक प्रतिरक्षा छ। त्यसैले एक asthenic छ किन सिंड्रोम? यो के हो र के लक्षण साथ दिनु? डाक्टर प्रस्ताव उपचार के हो?
Asthenic सिंड्रोम - यो के हो?
राज्य उल्लेख एक बिस्तारै उदीयमान psychopathological विकार सँगसँगै "Asten"। सामान्यतया, यो सिंड्रोम सँगसँगै छ दीर्घकालीन थकान र केही autonomic विकार। आधुनिक अनुसन्धानकर्ताहरूले अक्सर शरीर जब केही गम्भीर रोग हुन्छ कि स्नायु प्रणाली को थकान क्रमिक थकान को घटना व्याख्या। यो विकार प्राथमिक रोग रूपमा र पुनःस्थापना समयमा एकै समयमा देखा पर्न सक्ने रोचक छ।
थकान को मुख्य कारण
पहिले नै उल्लेख रूपमा, यो सिंड्रोम यो अवस्था अक्सर हृदयरोग, न्युरोलजी, gynecology र आधुनिक चिकित्सा को धेरै अन्य क्षेत्रमा निदान छ स्नायु प्रणाली, पोषक, भिटामिन, अक्सिजन को अभाव र यति मा। डी को रिक्तीकरण संग सम्बद्ध गर्न सकिन्छ।
मिति, धेरै वर्गीकरण योजनाहरू जस्तै उल्लंघन हो। जैविक asthenia मस्तिष्क को घाउ सँगसँगै। जोखिम कारक भडकाऊ र संक्रामक समावेश गर्ने स्नायु प्रणाली को रोगहरु, साथै ट्यूमर, टाउको चोट लागेको। उदाहरणका लागि, cerebrovascular asthenic सिंड्रोम को मस्तिष्क जहाजहरु मा अनुचित रगत प्रवाह कारण छ। साधारण चिसो, निमोनिया, अल्सर, पुरानो gastritis, hepatitis - केन्द्रीय स्नायु प्रणाली को रिक्तीकरण हुन सक्छ सबै जो।
पृथक र कार्यात्मक asthenic सिंड्रोम। यो के हो? यस्तो विकार सामान्यतया मानसिक र शारीरिक थकान, गंभीर तनाव संग सम्बन्धित छ।
थकान सँगसँगै लक्षण के के हुन्?
अक्सर, थकान पुरानो रोग विकसित बिस्तारै छ। यो फोक्सो रोगबाट सुरु। यसलाई केही आधारभूत विशेषताहरु आवंटित निर्णय:
न्यूरो-asthenia सिंड्रोम पुरानो थकान सँगसँगै छ। पनि आराम र लामो समयसम्म सो एक व्यक्ति बल प्राप्त गर्न मद्दत गर्दैन। बिस्तारै कम दक्षता - रोगी काममा कठिनाइ अनुभव छ, त्यहाँ स्मृति र एकाग्रता समस्या हो।
द्वारा विशेषता यो हालत लागि सो विकारहरु। केही मानिसहरू अनिद्रा ग्रस्त। अरूलाई सुत्न वा उठ्दै पछि कमजोरी अनुभव गर्न सक्दैन। कुनै पनि मामला मा, पनि एक लामो निद्रामा शक्ति पुनर्स्थापना छैन, त्यसैले दिनमा रोगी सुस्ती स्थिर bouts देखि पीडित।
कारण स्थिर थकान र निदाउरोपनको, र psycho-भावनात्मक विकार गर्न। केही विरामीहरु प्राय र चाँडै आफूलाई बाहिर जान, अचाक्ली पिन्चे र स्नायु हुन्छन्। अरूलाई, यसको विपरीत, lethargic सुस्त र अनुत्तरदायी छन्। यो मूड swings पालन गर्न सम्भव अक्सर छ।
को स्नायु प्रणाली को रिक्तीकरण सम्पूर्ण जीव असर गर्छ। त्यहाँ asthenic सिंड्रोम साथ दिनु केही वनस्पति विकार हो। यो रोगले के हो? शरीर मा पहिलो tachycardia, ठंड लाग्न, वा ज्वरो, अत्यधिक डराएको। केही विरामीहरु टाउको दुखाइ, रक्तचाप घटेको, potency कम बाट ग्रस्त छ।
उपचार asthenia को विधिहरू
निस्सन्देह, सुरुमा रोगी पूर्ण परीक्षा, यो asthenic सिंड्रोम को विकास को कारण निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण छ किनभने undergo पर्छ। अक्सर, विरामीहरु CNS कार्यहरु पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्न जो nootropics र neuroprotective एजेन्ट, सिफारिस प्राप्त। तैपनि, मात्र प्रभावकारी उपचार इष्टतम सिर्जना गर्न छ काम र बाँकी को मोड।
विरामीहरु को पहिलो महिनामा विशेष स्पा उपचार, एक लामो छुट्टी सुझाव दिन्छौं। आहार धेरै महत्वपूर्ण छ - खाना पौष्टिक हुन र पर्याप्त मात्रा मा सबै पोषक समावेश गर्नुपर्छ। तपाईं कार्यस्थल र परिवारमा एक तनावमुक्त वातावरण सिर्जना गर्दा मात्र सफल उपचार सम्भव छ।
सबैभन्दा गम्भीर अवस्थामा, विरामीहरु psychiatrists, antidepressants र neuroleptics संग नियमित सत्र आवश्यक छ।
किन बढेको कलेजो?
Likimiya। यो रोग के हो र यसको लक्षण के हुन्
पूरा हाम्रो मुख्य टाउको - pituitary मस्तिष्क
आफ्नो हात मा कटौती: पहिलो सहायता। जब एक कट हात चक्कु, ब्लेड, वा ग्लास के गर्न?
उज्बेकिस्तान, Khiva: ठाँउहरु (विवरण, फोटो)
कोण चक्की - Makita GA5030: मालिकहरुको अवलोकन, निर्दिष्टीकरण, विवरण र समीक्षा
बच्चा को लागि पहिलो जूता: कहाँ किन्न कसरी चयन गर्न। साना लागि जूता
समीक्षा "कार्की कम्बो 2", वर्णन, विशेषताहरु
जहाँ यसलाई खान: को pesto के हो?
1905 को क्रान्ति को मुख्य कारण
मानिसहरू मा मेष मा भेनस: अनुकूलता
Ivanov वैलेन्टिन Kozmich: सोभियत फुटबल खेलाडी र प्रशिक्षक को जीवनी
संरचित केबल प्रणाली (SCS) - यो के हो?
Waterproofing जग लागि सामाग्री: प्रकार, वर्गीकरण, विशेषताहरु